ကနီမြို့ နယ်ယာဉ်တိုက်မှု စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် စတင်စစ်ဆေး
ကနီမြို့ နယ်ယာဉ်တိုက်မှု စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် စတင်စစ်ဆေး စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကနီမြို့ နယ်မှာ လူနှစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ ယာဉ်တိုက်မှု နဲ့ပတ်သက်လို့ မြို့နယ်တရားသူကြီးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် အပေါ် ကျေးရွာ သုံးရွာက ရွာသား နှစ်ရာကျော် ဆန္ဒပြ စာတင်ခဲ့ကြပြီး မနေ့ကတော့ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်က အမှု စတင် စစ်ဆေးနေပြီလို့ သိရှိရပါတယ်။
ကနီမြို့ နယ် ကနေ မုံရွာကို ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခံရသူများ သယ်ဆောင်လာတဲ့ ခရီးသည်တင် ဘတ်စ်ကားကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့ က လမ်းကနေ တားဆီး ဆန္ဒပြခဲ့ပုံကို ယင်းမာပင်မြို့ နယ် သပြေအေး ကျေးရွာမှ ဆရာတော် ဦးသောပါက က အခုလို မိန့်ပါတယ်။"၁၇ ရက် ၇ လ ၂၀၁၂ နေ့မှာ မနက် ၃ နာရီလောက်မှာ လူစုကြတာပေါ့ဗျာ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ။ ဆိုင်ကယ်တွေ အစီး ၇၀ လောက်ရှိတယ်။ ရွာသားတွေ အကုန်လုံးထွက်၊ ဦးဇင်းတို့ ဒီ ယင်းမပင်မြို့နယ် တရော်ကျင်းကျေးရွာ ဆိုတာရှိတယ်။ ကနီ-မုံရွာ သွားတဲ့ ကားလမ်းပေါ်မှာ သွားပြီးတော့ ထိုင်စောင့်နေကြတာ။ မနက် ၄ နာရီလောက် ကတည်းက။ ၆ နာရီ ခွဲလောက်မှာ အဲဒီကား ရောက်လာတယ်။ ဦးဇင်းတို့က ကားကို တားထားတယ်။ ကနီ စခန်းမှူးတို့၊ မြို့နယ်မှူးတို့ အကုန်လုံး ရောက်လာကြတယ်။ သူတို့က ပြေပြေလည်လည် ဖြစ်စေချင်တဲ့ဟာမျိုး သိပ်မပါဘူးဗျ။ ခြိမ်းခြောက်တဲ့ ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေတယ်။ ဒါနဲ့ ဦးဇင်းတို့လည်း ကားကို တော်တော်နဲ့ ပြန်မလွှတ်ဘူး။"နေ့လည် ၁၁ နာရီကျမှ ကန်ီမြို့ နယ်ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ ယင်းမာပင်မြို့ နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှုးတို့ ရောက်ရှိလာပြီး ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသာအေး ထံ အကြောင်းကြားပေးပါမယ်။ စာရေးသား တင်ပြပါလို့ညှိနှိုင်းတဲ့အတွက် ပြေလည်မှု ရရှိသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။အခုလ ၂၀ ရက်နေ့ မှာ တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ထံ စာတင်ခဲ့ရာမှာ မနေ့က စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့ စည်းပြီး စတင် စစ်ဆေးတယ်လို့ သိရပါတယ်"စစ်ကိုင်းတိုင်းကနေ ကော်မရှင်ဖွဲ့တော့ မုံရွာခရိုင် တရားသူကြီး၊ နောက် ဒေါ်ခင်မာရီ၊ မြန်အောင်မြို့နယ်က တရားသူကြီး ဦးကျော်ကျော်၊ သူတို့ ၃ ယောက်ကနေပြီးတော့ ခုံရုံးဖွဲ့ပြီးတော့ စစ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ မနေ့က ဒီကသက်သေ ၈ ယောက်ပေါ့။ စစ်ပြီးပြီ။ ကနီမြို့နယ် တရားသူကြီးကိုလည်း စစ်အုန်းမယ်။ တရားသူကြီးကလည်း တရားခံ ဖြစ်သွားတာကို။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဒီ တရားသူကြီးကို ဦးဇင်းတို့က လာဘ်စားပြီးတော့ ဒီအမှုကို ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ တိုင်ထားတာ။"အမှုမှာ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး၊ ကနီမြို့နယ် အပိုင် တရော်ကျင်းရွာ အနီး ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ယာဉ်မောင်း ဦးရန်အောင်လင်း ဟာ ယာဉ်အမှတ် ၄ခ/၂၂၅၂ ကို မောင်းနှင်လာစဉ်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်မြို့နယ်၊ သပြေအေးရွာမှ ထော်လာဂျီကို ဝင်တိုက်မိပါတယ်။ သပြေအေးရွာမှ မောင်တင်ဝင်းပိုနဲ့ ကနီမြို့နယ် မိုးကောင်းရွာမှ မကြည်မြ တို့မှာ နေရာတွင် ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးသွားခဲ့ကြတဲ့ အပြင် ထော်လါဂျီ မောင်းနှင်သူ မောင်ဖိုးဇော် ပေါင်ကျိုးသွားခဲ့ပြီး သပြေကုန်းရွာသားတွေ အပြင်းအထန် ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အမှု ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမှုမှာ တရားရုံးက ဆောက်လုပ်ရေး ယာဉ်မောင်းကို ထောင်ကိုးလသာ ချမှတ်ခဲ့ပြီး သပြေကုန်းရွာသား မောင်ဖိုးဇော်ကို ထောင်ဒဏ် တနှစ် ချမှတ်ခဲ့တဲ့ အတွက် မကျေမနပ်ဖြစ်ပြီး၊ သပြေကုန်းကျေးရွာ၊ မိုးကောင်းကျေးရွာနဲ့ တရော်ကျင်း ကျေးရွာတို့ က ရွာသူရွာသားတွေ ဆန္ဒပြကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခကြေးယူ ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတဲ့ သမ္မတပြောဆိုချက်အပေါ် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြ ပိုစန်း ရေပိုက်လုံးစက်ရုံ အလုပ်သမားများ လစာတိုးမြှင့်ရေး ဆန္ဒပြ
မွန်ပြည်နယ်မှာ ၁၄ ရွာ စုပေါင်းဆန္ဒပြ
လှိုင်သာယာက ကိုးရီးယား အထည်ချုပ်စက်ရုံမှာ ဆန္ဒပြ
မအူပင်မြို့မှာ အင်းလုပ်သားများ ဆန္ဒပြ
အလုပ်ဖြုတ်ခံရတဲ့ အလုပ်သမား ၅၀ နီးပါးအတွက် ဆန္ဒပြ
ဟုန်စိန် ပီနံအိတ်စက်ရုံ အလုပ်သမားတွေ ဆန္ဒပြ
I hate myamar Feb 09, 2013 08:35 PM
ဒီလဘ်စားတာကတော.ဘယ်တော.များပျောက်မလဲ မသိဘူး ကျွန်တော်တို.လှိုင်သာယာမှာလဲ လ၀က တွေပါ၊ ငွေပေးမှ သန်းခေါင်စာရင်းလုပ်ပေးနေတာ၊ငွေမပေးနိုင်လို. ကြာနေတာ အခုဆို ၃ လတောင်ပြည်.တော.မယ် ကျွန်တော်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မွေးတဲ. မြန်မာပြည်သားစစ်စစ်ပါ ဒီအကြောင်းတွေကို RFA ကနေတဆင်. နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးသိအောင် တင်ပြလိုက်ရပါတယ်